Tag: gozie vaynerchuk
Search Engine Journal mepụtara nke atọ kwa afọ nke infographic na-aga n'ihu na-eto eto nke na-elekọta mmadụ media, na-enye ọnụ ọgụgụ gafee ọ bụla na-elekọta mmadụ na netwọk site na 2015. Ọ ga-emepe na a see okwu si Gary Vaynerchuk. Mgbe m nụrụ ka ndị mmadụ na-arụrịta ụka banyere ROI nke mgbasa ozi mmekọrịta? Ọ na-eme ka m cheta ihe kpatara ọtụtụ azụmaahịa ji ada. Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị agba ọsọ marathon. Ha na-egwu sprint. Ha anaghị echegbu onwe ha banyere uru ndụ na ijigide ndụ ha. Ha na-echegbu onwe ha
Afọ ole na ole gara aga, akwụsịrị m ịchọ ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso ụzọ. Anaghị m ekwu na ịsị na achọghị m ịga n'ihu na-eso ụzọ, naanị ihe m na-ekwu bụ na m kwụsịrị ile anya. Akwụsịrị m ịbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi n'ịntanetị. M kwụsịrị izere esemokwu. Akwụsịrị m ijide onwe m mgbe m nwere echiche siri ike. Amalitere m ikwesị ntụkwasị obi na nkwenkwe m ma na-elekwasị anya n'inye netwọ m uru. Nke a abụghị naanị na m na-elekọta mmadụ
Naanị isi na vidiyo a nwere ụfọdụ asụsụ mara mma. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike mkpa itinye na ekweisi. Nke a bụ ozi ọhụụ doro anya sitere na Gary Vaynerchuk. Enwere m mmasị na ozi ahụ na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ atụmatụ dị ogologo oge ma ọ bụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aghọtaghị. Ana m agwa ndị folks oge niile na ọ dị ka akaụntụ ezumike nka. Don't naghị atụ anya ị nweta ego otu ọnwa gachara,
Ekwenyeghi m na anụrụla m okwu ga-adaba na ụzọ anyị si arụ ọrụ na ndị ahịa anyị. Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ m na-asọpụrụ na ụlọ ọrụ ịre ahịa n'ịntanetị, Gary Vaynerchuk na-agaghị afụ anwụrụ ọkụ na usoro iwu… ọ na-agbasi mbọ ike, nwalee, ma mezie ụzọ ya maka ịre ahịa n'ịntanetị - wee nwee ihe ịga nke ọma. Nke a bụ okwu n’eziokwu ụdị okwu (ịdọ aka na ntị: okwu rere ure ụfọdụ e ji mesie ike) nke na-egosipụta n’ụzọ doro anya etu ụwa si agbanwe